Gamers na egwuregwu ndị hụrụ bụ ndị ọrụ mgbe nile chọrọ igosi N'igosipụta nkà ha ka ndị ọzọ na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà egwuregwu ndekọ omume na-ebudatara ma wụnye iji jide n'aka na ọ bụghị nanị na ọ bụla oge weghaara ma onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ndị ọkaibe results na nke a. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na reviews nke ndị ọzọ na-atụle mgbe usoro ihe omume ebudatara na zụrụ. Na a na nkuzi na n'ozuzu ruru nke usoro ihe omume na-depụtara bụ ndị na-na-akwụ ụgwọ dị ka egwuregwu ndekọ nkà na ụzụ bụ pụrụ iche na ya mere na ọ bụghị free mgbe niile.
P -Esonụ bụ ndepụta nke top 10 omume na a pụrụ iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na egwuregwu na ọbụna ihuenyo captures na-weghaara enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
Ọ bụ ihe kasị mma na n'elu ndepụta omume nke na-eme n'aka na onye ọ bụla ije nke cursor nakwa dị ka nke payer weghaara enweghị ihe ọ bụla njehie. The professionalism nke usoro ihe omume nwere ike ikpe site na eziokwu na ma ama tech ozi ọma na nkà na ụzụ na-weebụsaịtị nyere Gold Award a usoro dị ka ọ na e mepụtara na-eme ka n'aka na gamers na-mgbe gbahapụrụ mgbe ọ na-abịa nkà na ụzụ ọganihu na yiri na nmepe nke kasị mma n'ụzọ. Ndepụta nke atụmatụ na e agbakwunyere bụ kwa ogologo otú ọ na-gwara iji jide n'aka na URL a gara n'ihi na ihe ọmụma na nke a nke mere na onye ọrụ na-ọkọkpọhi kasị mma ndibiat.
Ọ bụkwa otu nke kasị mma omume nke na-ahụ na ndị kasị mma e mepụtara maka gamers mere na ha na pacified na-aghọ otu n'ime ndị kasị mma ad ọkaibe omume ndekọ dị ka mma. E wezụga egwuregwu ndekọ a usoro na-emekwa ka n'aka na ndị kasị mma na ihuenyo akada na video ndekọ ụlọ ọrụ na-nyere ka ọrụ ka e wuru site kasị ọkachamara aka nke ụlọ ọrụ na-eme ka n'aka na gamers-nọ na-na otu n'elu ikpo okwu.
3. Ijuanya Share Video teepu
Ọ bụ nanị na-edekọ na-abịa na a video convertor mere na gamers ike idekọ na bulite ma ọ bụ ịkọrọ ndị video dị ka kwa mkpa ha na ọchịchọ iji jide n'aka na-erughị ohere nchekwa nakwa dị ka n'ozuzu usoro ego, bụ iwesa na ala na afọ ojuju. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ikike nke usoro ihe omume a ga-zụrụ otu oge naanị na mmelite free maka ndụ nke na-eme ya kasị mma na ndị ọkaibe omume na nke a na ndepụta. Wondershare Video Convertor abịa na Wondershare Video edekọ nke pụtara na wụnye convertor na-akpaghị aka installs nke Video-edekọ ihe. Wondershare Video convertor kacha ya onwe ya bụ ngwá ọrụ dị ike nke na-n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe na-arụpụta mgbe ọ na-abịa edezi, nbudata, converting na ndepụta na-aga. Ọ na-emekwa n'aka na video na-streamed ndụ ka TV na enyemaka nke media center na e agbakwunyere. Ọ na-akwado HD na 4K technology. The ụzọ na video edekọ bụ NchNhr> video edekọ dị ka e gosiri na foto n'okpuru.
4. Play mboanuohia
Ọ bụrụ na onye ọrụ chọrọ ka n'aka na ihe kasị mma egwuregwu edekọ nke nwekwara ike ijide n'aka na audio nke onye a na-dere bụ zụrụ mgbe ahụ Play mboanuohia bụ ihe kasị mma na ọkaibe omume na bụ na- ebudatara na nke a iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi na mmekọrita egwuregwu Ndekọ na olu.
Iji mee ka ndị kasị mma ojiji nke ego nakwa dị ka usoro ego ọ na-gwara iji jide n'aka na onye ọrụ kwesịrị ibudata na wụnye usoro mgbe ọ na-e zụrụ. Ọ bụ ihe kasị mma na ọkaibe omume nke na-eme n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma amụọ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu na mkpokọta onu nke egwuregwu ndekọ a na-ẹnịm ke kasị mma n'ụzọ.
Na nke kacha mma egwuregwu akada usoro na mkpokọta onu na e chebere na nke a onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ihe omume ahụ zụrụ na ebudatara enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na instructional ndu na-agụ na- kasị mma na ndị ọkaibe atụmatụ na e agbakwunyere n'ime usoro ihe omume. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị inwe ihe kasị mma nke ihe omume ahụ site anwale ya mbụ.
Egwuregwu a na-edekọ na-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma nke mmemme na e mere ka ya egwu na ọrụ enyi na enyi interface. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ na nke a na-rịọrọ iji jide n'aka na niile functionalities-n'ụzọ zuru ezu enyoba tupu ihe omume a na zụrụ na ọ na-agụnye n'ozuzu reviews na ọrụ nyere nakwa dị ka Fim na omume nwere natara.
8. WM kpọọ
Nke a na usoro captures egwuregwu na a n'ụzọ nke na-eme n'aka na ndụ egwuregwu na mkpokọta onu na e kwuwo na-enyoba na nke kacha mma n'ụzọ. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ na nke a kwesịrị ijide n'aka na egwuregwu bụ ndị ịdekọrọ site iji a elu na-agba njikọ Ịntanetị nke mere na ndekọ na-eme na ihe kasị mma n'ụzọ.
The n'ozuzu okirikiri nhọrọ ukwuu na functionalities na e agbakwunyere n'ime usoro ihe omume bụ ndị na-bụ ndị dị mfe na-eso na ndị a na-eme ka n'aka na ihe kasị mma pụta e nyere onye ọrụ na nke a. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na tupu zuo e mere n'ozuzu echiche metụtara usoro ihe omume a na-enyoba.
10. ZD adụ ihuenyo edekọ
Ụlọ ọrụ a maara nke na-eme ngwaahịa na-ala nke nkà na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na omume na-ebudatara na ụdị nke onye ahụ e doro. Ọ bụ usoro ihe omume nke na-eme n'aka na gamer ọkọkpọhi ọ bụla oge nke egwuregwu dekọrọ na kasị mma n'ụzọ.
> Resource> Game> Top 10 Game ndekọ software 2015 n'ihi na pc